Yusuf Garaad: Soomaaliya iyo Somaliland
Dullimaadka hawada Soomaaliya
Bishan July 9 keedii ayaa magaalada Istanbul ay mas’uuliyiin sare oo Soomaaliya iyo Somaliland ka socdaa waxay ku heshiiyeen in ay la soo wareegaan maamulka hawada Soomaaliya, in la isla maamulo iyo in Hargeysa laga maamulo. Waxaan qormadan ku soo bandhigayaa wixii laga soo maray in heerkan la soo gaaro, waxyaabo heshiiskan weli ka dhimman, waxa la maamulayaa waxa ay yihiin, qiyaasta dakhliga ka imaan kara iyo weliba haadaanta muuqata ee hor taalla meelmarinta heshiiskan.
Waxay ahayd 2002 markii Dowladdii (TNG) ee uu Madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad ay weriyayaasha Muqdisho isugu yeertay ee dowladdu ku dhawaaqday in wixii “maanta ka dambeeya” hawada Soomaaliya laga maamuli doono Muqdisho. Waxaa weriyayaasha loo sheegay in loo oggol yahay in ay duubaan wadahadalka dhex maraya dayaarad ku jirta hawada Soomaaliya iyo sarkaal duulista hawada ah oo Raadiye la fadhiyay Muqdisho.
Sarkaalkii wey u suurta gashay in uu dayaarad la hadlo, markii ay isdhaafsadeen su’aalo iyo jawaabo tashwiish fara badani ku dhex jiro, ayaa waxaa soo dhex galay cod ka faseexsan labadaba oo duuliyaha ku yiri: Ha la hadlin qofkaas waa burcad. Annaga ayaa halkan kaa hagi doonna.
Dowladdii Shiikh Shariif ee TNG ayaa Ra’iisal Wasaare, Cumar Cabdirashdiid billaabay in uu isku dayo in uu soo ceshado maamulka hawada Soomaaliya. Wuxuu qoray codsi aan cidi dheg jalaq u siin. Wuxuuna Gegida dayaaradaha ee Muqdisho uu qandaraas ku siiyay in ay maamusho, sharikad laga leeyahay Dubai, oo la yiraahdo SKA.
Ra’iisal Wasaare Maxamed Cabdullaahi ayaa isaguna ka mid ahaa Madaxdii Soomaaliya ee isku dayay in ay maamulka hawada dalka ay kala soo wareegaan xafiiskii Nairobi laga unkay ee CACAS ee ay wadajirka u sameeyeen UNDP iyo Ururka caalamiga ah ee Duullimaadka. Codsigiisii lama meelmarin.
Soomaaliya hadda waxaa ka jirta Dowlad ka gudubtay ku meel gaar wixii loo yiqiin. Bishii May ee sannadkan ayaa Wasiirka Isgaarsiinta iyo Gaadiidka, Cabdullaahi Ciilmooge, wuxuu ku dhawaaqay warkan oo dad badani ku farxay. Bishii June ayay Golaha Wasiirradu ay Muqdisho fariisteen oo ay ansixiyeen qaanuun ku saabsan Duullimaadka hawada Soomaaliya, si Baarlamaanka loogu gudbiyo. Maalintaas waxaa xafiiska Ra’iisal Wasaare, Saacid Shirdoon, uu ku tilmaamay in qaanuunkaasi uu wax weyn ka beddeleyo oo kacdoon hor leh uu gelinayo madaxbannaanida hawada Soomaaliya.
Hawada la wareejinayo waa Soohdimaha caalamiga ah ee Soomaaliya oo dhan oo ay ku juraan Somaliland iyo hawada badda Soomaaliya. Waa marin dayaaradeed oo muhiim ah. Afrika iyo Carabta ayuu isku xiraa. Ma aha keliya dayaaradaha maalin kasta ka degeya Muqdisho, Hargeysa, Gaalkacyo, Kismaayo iyo meelo kala oo badan oo Soomaaliya ka tirsan. Sida aan ka akhriyay New York Times, qiyaastii 90 dayaaradood ayaa maalin kasta soo gala hawada Soomaaliya. Waxaa ka mid ah Air France oo u kala goosheysa Paris iyo Réunion. Emirates oo isku xireysa Dubai iyo Johannesburg. Dayaaradda Israel El AL oo Tel Aviv iyo Thailand isku xireysa. Mar kasta oo dayaarad Jet ah oo rakaab siddaa ay hawada Soomaaliya soo dul martana waxay bixisaa $275.
Markii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay la wareegeyso hagidda dayaaradaha, waxaa furka tuurtay Somaliland. Waxay ku hanjabtay kana dhabaysay in ay joojiso dullimaadyadii Qaramada Midoobay (QM) ee tegi jiray Somaliland. Waxay u aragtay in QM ay hawada “Somaliland” ku wareejineyso “Soomaaliya”.
Ergada Muqdisho ka timid iyaga waxaa u yaalla su’aalo ka adag kuwa Hargeysa la is weydiinayo.
Maxaad hawada Soomaaliya ugu wareejiseen Gobollo aan caalamka iyo dowladda Soomaaliya midkoodna dowlad u aqoonsayn? Ayaa ka mid ah su'aalaha soo noqnoqonaya ee aad ka daalacan karto saxaafadda bulshada. Waxaa jiri doonta in Puntland oo iyadu tartan kula jirta Somaliland, haddana aanay isku wanaagsanayn Dowladda Federalku, ay su’aalo waaweyn meesha keento. Puntland hadday weydiisato in dakhliga qeybteeda laga siiyo, waxay dad badan ula muuqan doontaa wax macquul ah.
Hawlgalku marka uu billowdo waxaa dhici karta in laba ama saddex jeer isla maalin gudaheed ay soo baxaan arrimo u baahan in cid iyaga ka sarreysa ay ula laabtaan, go’aan deg deg ahna loo baahdo. Marka ay xaaladdaasi timaad, yaa loo noqonayaa? Dakhliga sidee loo qeybsanayaa?
Dabcan Xafiisku wuxuu ahaanayaa Hargeysa. Raadiyuhu wuxuu oollayaa Hargeysa. Waxaa la ii sheegay in la filayo in Madaxa Kooxdu uu ka imaan doono Muqdisho, ku xigeenkuna Hargeysa. Laakiin tirada kooxda lama yaqaan. Weli laguma heshiin ayaan maqlayaa “code”-ka ama afgaradka ay isticmaali doonto. Dakhliga sida loo qeybsanayana weli laguma heshiin.
Haddii intaas oo dhan la isku af garto, weli waxaa taagan su’aalo kale. Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991, waa markii ugu horreysay ee Soomaali ay maamusho hawadeeda. Biseylkeedii ma leennahay?
Mise waxaa la isticmaali doonaa xeerka caalamiga ah ee dayaaradaha yaryar ku duulaya joogga gaaban ee dhul hawo wanaagsan oo duuliyuhu ku hagi karo dayaaradda araggiisa dhulka (VFR – Visual Flight Rules)?
Waxaanan rajeynayaa in ay xigi doonaan heshiisyo ka sii muhiimsan oo aakhirka keena in midnimo ama deris wanaag mid uun la isku afgarto.
Posted by Yusuf Garaad at 11:59:00